ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ တွင် ရုရှား နိုင်ငံ မှတ်ပုံ တင်မည် ……. – Shwe Thoon 8 Online Media
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ တွင် ရုရှား နိုင်ငံ မှတ်ပုံ တင်မည် …….
…မော်စကို ၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် ။ ။ ရုရှားနိုင်ငံ ဟာ Covid-19 ကာကွယ် ဆေး ရှာဖွေမှု မှာ စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ တယ် လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေ က ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့တဲ့ အတိုင်း လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၂ ရက် အတွင်း ဒီကာကွယ်ဆေး ကို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Covid-19 ကာကွယ်ဆေး အဖြစ် မှတ်ပုံတင်သွားမ ယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ပြီးသွား ရင် ဒီဆေးဟာ ကမ္ဘာ့ကပ် ရောဂါ အဖြစ် ရင်ဆိုင်နေရ တဲ့ Covid-19 ရောဂါကူးစက်မှု မရှိအောင် ကာကွယ်နိုင် မဲ့ ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေး အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒီဆေးကို ထောက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေး ဟာ မော်စကိုက Gamaleya Institute နဲ့ ရုရှား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရံပုံငွေ (RDIF) တို့ ပူးပေါင်း သုတေသနပြုဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ မှတ်ပုံတင်ပြီးစီးသွားမယ် ဆိုပါက သုံးရက်ကနေ ခုနှစ်ရက် အတွင်း ပြည်သူတွေ ကို ကာကွယ်ဆေး အဖြစ် တရားဝင်ထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရုရှား အစိုးရပိုင် သတင်းဌာန RIA Novosti news ကတော့ ဒီ ကာကွယ်ဆေးကို သြဂုတ်လ ၁၅-၁၆ မှာ ခွင့်ပြုမိန့်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီသတင်း နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Gamaleya Institute နဲ့ RDIF တို့ နှစ်ဖက် စလုံး က မှတ်ချက်ပေး ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
ဒီ ကာကွယ်ဆေး စမ်း သပ်စစ်ဆေး မှု နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုသော အချက် အလက်တွေ ကိုမှ အများပြည်သူ သိအောင် ထုတ်ပြတ်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးတာက ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ် သက်ပြီး သံသယတော့ ရှိစေတယ် လို့ ဆိုနေကြပါ တယ်။
ဒီဆေးကို စမ်းသပ်သုတေသန ပြုနေသူတွေအနေ နဲ့ ကာကွယ်ဆေးဟာ အများပြည်သူအသုံးပြုဖို့အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိကြောင်းလည်း တိတိပပ ပြောကြားခြင်း မရှိသေးဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်တစ်ပတ် ထဲ မှာတော့ ဒီကာကွယ်ဆေး ကို ရုရှား၊ ဆော်ဒီအာရေး ဗီးယား နဲ့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု( ယူအေအီး) တို့ မှာ စမ်းသပ်သွားမှာဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
မော်စကို ၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် ။ ။ ရုရှားနိုင်ငံ ဟာ Covid-19 ကာကွယ် ဆေး ရှာဖွေမှု မှာ စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ တယ် လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေ က ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့တဲ့ အတိုင်း လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၂ ရက် အတွင်း ဒီကာကွယ်ဆေး ကို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Covid-19 ကာကွယ်ဆေး အဖြစ် မှတ်ပုံတင်သွားမ ယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
← အမြင်အေး စေပြီး ရင်အေးစေတဲ့ အလှလေး နဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ် ….
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် “ဝက်သားဟင်း” …. →